ख्याल गर्नुस अहिले 'विन्टर डिप्रेसन' हुनसक्छ - Ekata News
गोपाल ढकाल / माघ १४, २०७४ - आइतवार
डिप्रेसन धेरै प्रकारका हुन्छन् त्यसमध्ये विन्टर डिप्रेसन एक प्रकार हो। यसलाई नेपालीमा ‘हिउँदे उदासिनता’ पनि भनिन्छ। यसलाई सिजनल डिप्रेसन पनि भन्ने गरिन्छ। मेडिकल भाषामा सिजनल अफेक्टिभ डिसअर्डर को नामले पनि यसलाई चिनिन्छ।
मौसम फेरिएसँगै डिप्रेसनको लक्षण देखिनेलाई सिजनल डिप्रेसन भन्न सकिन्छ। अहिले जाडो मौसम छ। अरु मौसममा नदेखिने तर जाडो लाग्नेबित्तिकै देखा पर्ने डिप्रेसन विन्टर डिप्रेसन हो।
मानिसको मनलाई धेरै कुराले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। कहिले मानिस दुःखी हुन्छ त कहिले खुसी। मानिसको मन स्थिर हुँदैन। मौसम जस्तै परिवर्तनशील छ मानिसको मन। वातावरणले पनि मानिसको दैनिकीमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। कहिले दुःखी हुनु, खुसी हुनु सामान्य कुरा हुन् तर त्यही बानी लामो समयसम्म देखा परे त्यो निराशा बदलिन्छ त्यो भनेको डिप्रेसन हुन सक्छ।
किन हुन्छ विन्टर डिप्रेसन?
हिउँदमा दिन छोटा हुन्छन् तर रात लामो हुन्छ। घाम लाग्दैन अनि सूर्यको प्रकाश त्यति पर्दैन। सूर्यको प्रकाश नर्पनाले एक प्रकारको हार्मोन न्युरो केमिकल ट्रान्समिटर सिरोटोनियन को उत्पादन एकदमै कम हुन्छ। डिप्रेसन पनि त्यही सिरोटोनियन हार्मोेनकोे कम उत्पादनले हुने हो। सिरोटोनियन हार्मोनको निष्काषन हुनुको लागि सूर्यको प्रकाश आवश्यकता हुन्छ अरु प्रकाशले काम गर्दैन।
जाडो मौसम सुरु हुनेबित्तिकै निराश हुने, केही काम गर्न मन नलाग्ने, निद्रा बढी लाग्ने, थकाइ लाग्ने, अल्छि लाग्ने , खाना बढी खान मन लाग्ने, जोश जाँगर नलाग्ने, शरीरमा उर्जा नहुने जस्ता सामान्य समस्या या महसुस हामी सामान्य व्यक्तिले पनि गर्छौँ। सबैलाई डिप्रेसन भएको भनिहाल्न मिल्दैन तर यी समस्या भएका मानिसहरुलाई जाडो मौसम आउनसाथ यी लक्षणहरु अझ बढी आउन सक्छन्।
सेरोटोनियन हार्मोन बे्रनले निष्काशन गर्छ। जाडोयाममा या वर्षातको बेला धुम्म बादल लाग्ने, कुहिरो लाग्ने हुन्छ। सूर्यको प्रकाश कम पाइन्छ त्यतिबेला यो हार्मोनको उत्पादनमा पनि कमी आउँछ।
जाडोयाममा दिन छोटा हुन्छन् घाम लाग्दैन अनि कुहिरो लागिरहन्छ घाम पर्दैन। रात लामो हुन्छ। रातमा उत्पादन हुने हार्मोन होे मेलाटोनिन। जाडो सिजनमा यसको उत्पादन बढी हुन्छ। अँध्यारोमा निष्काषन हुने हार्मान मेलाटोनिन हो त्यसैले हामी बढी निदाउँछौँ। खाना पनि बढी रुच्ने हुन्छ। आलश्य बढ्ने पनि हुन्छ तर यी सबै सामान्य हुन्। तर जो रोगी छ उनीहरुलाई धेरै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, उनीहरुको दैनिकी नै तलमाथि भइरहेको हुन्छ।
कसलाई बढी हुन्छ?
यो डिप्रेसन चाहिँ बालबालिका,महिला र वृद्धवृद्धामा बढी हुन्छ। उनीहरुलाई सामान्य मानिसभन्दा सूर्यका प्रकाश अझ बढी आवश्यकता पर्छ। ३० देखि ४० प्रतिशत मानिसहरुलाई यो समस्याले सताएको छ। विशेषगरी युरोपियन देशहरुमा यो समस्या बढ्दो छ। ६ महिना दिन ६ महिना रात हुने मुलुकमा यो समस्या बढी छ। सिजनल डिप्रेसन हुने बढ्दो छन्। त्यहाँ आत्महत्याको दर पनि बढ्दो छ।
तथ्यांक अनि समाचारले पनि के देखाउँछ भने नेपालको इलाममा आत्महत्याको दर बढ्दो छ। एउटा कारण यो पनि हुन सक्छ। त्यहाँ एकदम बादल, जाडो हुने, बर्खामा पनि कुहिरो लाग्ने धुम्म पर्ने हुन्छ। धुम्म दिन हेर्दा नै निराशा महसुस हुन्छ, उदास लाग्छ। घाम लाग्यो भने रमाइलो दिन भनेर हामी पनि भन्छाैं।
मन उदास हुनु, दुःखी हुनु,केही कुराले पनि खुसी बनाउन नसक्ने, रुन मन लाग्ने, रमाउन नसक्ने, झर्को लाग्ने, जोश जाँगर नचल्ने, घुम्न जाने रहर नलाग्ने, कुनै कुराको निर्णय लिन नसक्ने, कुनै कुरामा ध्यान नहुने भनेको मनको अवस्था तल झर्नु हो। यी यावत् लक्षण कहिलेकसो देखापर्छ मानिसमा किन कि मानिसको मन स्थिर हुँदैन।
तर जाडो मौसम सुरु हुनेबित्तिकै यी लक्षणहरु २ हप्ताभन्दा भन्दा बढी लगातार दिनरात देखिएमा विन्टर डिप्रेसन भएको मान्न सकिन्छ। डिप्रेसनका प्रकार हेरी लक्षण पनि फरक छन्। कुनै डिप्रेसन हुँदा खान मनलाग्ने, अरुचि हुन्छ, निद्रा नलाग्ने, तौल अनि खानपीनमा तलमाथि हुने जस्ता लक्षणहरु हुन सक्छन् तर विन्टर डिप्रेसन हुँदा ठिक उल्टो हुन्छ। विन्टर डिप्रेसनमा चाहिँ खाना रुच्छ र निद्रा पनि बढी लाग्छ। मान्छे मोटाउँछ पनि।
मानिसले शारीरिक हेरचाहमा पनि ख्याल गर्दैन। एकदम थकाइ लाग्छ अनि उर्जा नै नभएको जस्तो हुने हुन्छ। अनि यस्ता लक्षण देखा पर्दे जाँदा नकारात्मक सोचाइ आएर मानिस आत्महत्या गर्नसम्म पुग्छ । प्राय सबैलाई यो मौसमले फरक पारे पनि यो रोगीलाई दैनिक जीवनमै निकै कठिनाइ हुन्छ ।
घाममा बसेर बदाम खानु राम्रो
युरोपियन देशमा यो बढी देखिएको छ। र नेपालमा पनि त्यो समस्या बढेको पाइएको छ। न्यृुरो केमिकल उत्पादनमा घटी बढी हुनाले दैनिकी फरक बन्न पुग्छ। अरु मौसममा मानिस ठिकठाक हुने तर जाडो लाग्नेबित्तिकै डिप्रेसनका लक्षण देखा पर्ने गर्दछ।
अरु डिप्रेसनको उपचार जस्तै यो पनि उस्ताउस्तै हो। सामान्य लक्षण छन् भने मनोपरामर्शले पनि ठिक हुन्छन्। जो मानिस गर्मी ठाउँमा बस्छ र बसाइँ सरेर जाडो ठाउँमा गएको छ भने पनि उसलाई यो डिप्रेसन हुन सक्छ।
यो समस्याको प्रत्यक्ष कारण घामको प्रकाशसँग जोडिने भएकाले घाम लाग्ने ठाउँमा बस्नुपर्छ। कसैको अफिस वा घर घाम नलाग्ने ठाउँमा हुन सक्छ मिलेसम्म सिफ्ट गर्दा राम्रो हुन्छ। नत्र भने कोठा न्यानो पारेर बस्नुपर्छ। कसैको बानी बत्ती नबालिकन बस्ने हुन्छ त्यसो गर्नुहुन्न।
उज्यालोमा बस्नुपर्छ। हाम्रो नेपाली समाजमा हामी घाममा बसेर तेल लगाउने, बदाम खाने चलन छ। घाममा बस्दा एक किसिमको आनन्द महसुस हुन्छ। किन कि सिरोटोनियन नामको हार्मोन उत्पादन हुन्छ। घाममा बस्दा उर्जा प्राप्त हुन्छ।
यदि यस्तो लक्षण देखा परिरहेको छ भने आफ्नो जीवनशैली र दिनचर्यामा नै परिवर्तन आवश्यक छ। बिहान धेरै सुत्नु हुँदैन। किन कि बिहानकी भिटामिनयुक्त घाम हामीले नपाउन सक्छौँ। सकेसम्म मोर्निङवाक जाने, साइक्लिङ गर्ने, योग गर्ने अनि हल्का व्यायाम गर्दा शरीरमा स्फूर्ति बढ्छ। धेरैको पानी खाने बानी छुट्छ जाडो लाग्दा।
जाडोमा पनि पर्याप्त मात्रामा मनतातो पानी तथा झोलिलो पदार्थ सेवन गर्नुपर्छ। खानपीनमा पनि ओमेगा ३ भएको खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ। माछा तथा आलसमा यो धेरै मात्रामा पाइन्छ। त्यसैगरी विन्टर डिप्रेसनका रोगीहरुलाई कृत्रिम ताप दिएर लाइट थेरापी पनि दिइने गरिन्छ। नेपालमा त्यो त्यति उपलब्ध नभए पनि विदेशमा यसको प्रयोग गरिन्छ।
एउटा लाइट बक्स हुन्छ जसले सूर्यको जस्तै प्रकाश प्रदान गर्छ। यो बिहान बिहान आधाघण्टा जति थेरापी गरिन्छ। सूर्यको प्रकाशका कमीका कारण पनि डिप्रेसन हुन सक्छ भनेर सचेत हुनुस्। घरका वृद्धवृद्धा र बालबच्चालाई जोगाउनुस्। कोठामा बसेर न्यायो लुगा लगाएर मात्र हुँदैन। घाममा डढिन्छ धेरै बस्दा भनेर मानसिकता हटाउनुस्।
प्राकृतिक तापको फाइदा लिनुस्। घामले फाइदा गर्छ। जाडोले शारीरिक स्वास्थ्यमा असर त पार्छ नै मानसिक पनि पार्न सक्छ भनेर जानिराख्नुस्। हामी जाडो महिनामा पिकनिक जान्छाँै। घाम लागेकै ठाउँमा जान्छौँ। नाच्छाँै, खान्छौँ त्यसले व्यायाम पनि प्रदान गरिरहेको हुन्छ।
जानी नजानी यसको पनि यससित सम्बन्ध रहेको छ। घाम लागेको ठाउँमा जाँदा जाडोमा हामीलाई उर्जा पनि प्रदान गर्छ रमाइलो लाग्छ। सिजनल डिप्रेसनबाट छुट्कारा पाउन यी उपायहरु अपनाउन जरुरी छ । (ढकाल मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्र चाबाहिलका अध्यक्ष तथा मनोविद हुन् )